Amaphupho Ngezinwele - Amaphupho Nezincazelo
Izincazelo zamaphupho nezithakazelo
Noma ngabe uyasikholwa noma awusikholwa isigameko esise ncadini encwele phakathi kuka Samsoni no Delile kodwa lokhu khona kwezinwele kuyiqiniso. Phela kulesisigameko uSamsoni walala kwase kuthi intokazi ewu Delile yamgunda izinywele aphela amandla akhe.
Lesisigameko ngisiletha lapha hhayi ngoba ngilikholwa kodwa ngifuna ngithi uma ngichaza ngezinwele nawe usheshe ucacelwe.
Amaphupho Ngezinwele Asho Ukuthini?
Ukuphupha izinwele akuyona into ejwayelekile nje kithi sonke. Kodwa futhi uma ngabe sekwenzekile waziphupha kunendlela okungafanele uziphuphe ngayo.
Ukuphupha izinwelw zakho zigundiwe lokho kusho ukuthi amandla akho ayantshontshwa ngandlela thizeni. Kulesisikhathi ke samanje ziningi izindlela abantu abakwenzwa ngayo lokho. Kodwa nje elami lithi uma uphupha izinwele zakho zigundwa kufanele ukhathazeke.
Ukuphupha izinwele zakho zikhulile futhi ziznhle lokhu kukhomba ukuthi izinto zakho zamandla zihamba kahle. Ukube kuya ngami ngabe ngithi phakama usebenze kakhulu kunakuqala.
Ukuphupha Izinwele Zincolile
Naleliphupho alilihle nhlobo noma ke nje lona lingafaki umuntu wesibile. Kukhona la okufanele ukuthi ukwenzile ukuze amandla akho abuyele esimweni sawo. Ungakhathazeki ngoba wona awahambile ngokwezinkomba zaleliphupho
Sesiphetha nje singasho ukuthi amaphupho ngezinwele onke abika ukuthi isimo sakho samandla owazalwa nawo simi kanjani. Lamapho ayakuqwashisha futhi ayaba yisexwayiso ngokunjalo
← Ukuphupha Umthakathi Kuchaza Ukuthini
Ukuphupha Umthakathi Kuchaza Ukuthini
Amaphupho Abika Isitha Nawa
Ukuphupha Imoto Ishayisile